Guadalest, tanàna nofinofy ao amin'ny faritanin'i Alicante | Vaovao momba ny dia
Guadalest dia iray amin'ireo tanàna tsy manam-paharoa sy tsara tarehy indrindra ao Faritanin'i Alicante. Any amin'ny faritry ny Marina Baja, izay renivohiny Villajoyosa, saingy tsy manana morontsiraka. Ny mifanohitra amin'izany no izy, eo amin'ny havoana no misy azy ary voahodidin'ny haavo manan-danja indrindra amin'ny faritra toy ny Sierra de Aitana onja an'ny ny Xortà.
nanambara ny Kompana ara-tantara-kanto tamin'ny 1974, Guadalest koa dia ao anatin'ny tambajotran'ny Ny tanàna tsara tarehy indrindra any Espana. Voafehin'ny tranony mahavariana, mandehandeha eny amin'ny arabe tery misy trano fotsy sy mitsidika ny tranombakoka dia hanome anao traikefa miavaka. Raha te hahalala bebe kokoa ianao The Castell de Guadalest, satria tena nantsoina ity tanàna ity, dia mamporisika anao izahay hanohy hamaky.
1 Inona no ho hita any Guadalest
1.1 Ny lapan'i Guadalest
1.2 Ny fiangonan'ny vadin'ny vadintany
1.3 Tranon'i Orduña
1.5 Ireo tranombakoka any Guadalest
2 Inona no hatao ao amin'ny tanànan'ny Alicante
3 Inona no hohanina any Guadalest
4 Ahoana no ahatongavana any amin'ny tanàna
5 Inona no fotoana tsara indrindra hitsidihana an'i Guadalest
Inona no ho hita any Guadalest
Ankoatry ny fankafizana ireo fomba fijery mahavariana atolotry ny hevitraAo Guadalest ianao dia manana lova mampiavaka mahaliana sy ny mety hanaovana hetsika hafa. Haneho anao izay ho hitanao ao amin'ny tanànan'i Alicante izahay.
Ny lapan'i Guadalest
Antsoina koa lapan'i san jose, dia trano mimanda silamo taloha tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Niorina tamin'ny faritra avo indrindra tao an-tanàna, nanan-danja lehibe stratejika izany nandritra ny Moyen Âge. Na izany aza, horohoron-tany sy ady roa toy ny Adin'ny Fahaleovantena no nahatonga ny fanjakany ankehitriny, saika rava. Na izany aza, mbola azonao atao ny mitsidika ny taolany.
Ny fiangonan'ny vadin'ny vadintany
Naorina tamin'ny taonjato faha-XNUMX taorian'ny Kanona an'ny Santionan'izany fiangaly, Niaritra fahasimbana ihany koa izy ka voatery namerina azy tamin'ny 1962 nanala ny cupola sy ny transept. Manasongadina zava-tsarobidy iray izy ireo ao anatiny alitara noforonin'ny mpanamboatra kabinetra Jose Maria Moya ary ilay mpanao hosodoko David Pastora. Araka ny asehon'ny anaran'ny fiangonana dia maneho ny Fanambarana sy ny fiainan'i Jesosy Kristy.
Io no trano manandanja lehibe indrindra any Guadalest. Izy io dia natsangana taorian'ny horohoron-tany tamin'ny 1644 ary nantsoina tamin'ny fianakaviana Orduña, izay nitondra ny tanàna nandritra ny telonjato taona. Foiben'ny a mozea monisipaly Izy io dia mampiseho fanaka tamin'ny taonjato faha-XNUMX, sary hosodoko tamin'ny taonjato faha-XNUMX, fanangonana keramika, sarintany, sary taloha ary zavatra maro hafa.
Mahagaga fa eo amin'ny rihana ambanin'ny Lapan'ny tanàna Guadalest dia azonao atao ihany koa ny mitsidika tranomaizina taloha tamin'ny taonjato faha-XNUMX izay mitarika anay hiresaka momba ny tranombakoka eo an-toerana satria misy iray manokana ho an'ny fampijaliana medieval.
Ireo tranombakoka any Guadalest
Miaraka amin'ny hatsarana lehibe eto amin'ity tanàna Alicante ity dia ho gaga ianao amin'ny isan'ny tranom-bakoka mahaliana natolotra ny mpitsidika. Efa niresaka momba ny Medieval ara-tantara, miaraka amin'ireo zavatra mampijaly sy mampijaly ary koa an'i Casa Orduña. Fa misy ny hafa mbola mahagaga kokoa.
Izany no tranga tranombakoka microgiant, izay ahitanao sary kely mahavariana. Ohatra, Goya's 'The Executions of May Two' ao anaty voam-bary, famonoana omby vita amin'ny lohan'ny paingotra na ny Statue of Liberty ao anatin'ny mason'ny fanjaitra. Izy rehetra dia noforonin'ny artista avokoa Manuel Ussa, heverina ho iray amin'ireo microminiaturista tsara indrindra eran'izao tontolo izao.
Tsy latsa-danja ihany koa ny Trano tranom-bakoka sy trano fandraisam-bahiny ao Betlehema izay ahitanao kilalao taloha be sy sehatra nahaterahana eo amin'ny tontolo iainana. Ary toy izany koa no azo lazaina tranom-bakoka misy sira sy sakamalao, izay misy sombintsombiny mihoatra ny roa alina, ny sasany dia avy amin'ny 1800 taona lasa izay.
Etsy ankilany, mitovy tsara tarehy ny Tranombakoka Ethnographic, izay mamerina ny ain'ny mponina ao amin'ny lohasaha Guadalest taloha. Akanjo mahazatra, fanaka ary kojakoja ilaina amin'ny fampiasana isan'andro no mandrafitra ireo zavatra aseho amin'ity toerana ity.
Atin'ny trano Orduña
Farany, ny Tranombakoky ny fiaran'ny fiaran'ny tantara Mampiseho anao moto 140 sy fiara antitra ao anaty efitrano tsara tarehy. Ho hitanao eto ihany koa ireo sombin-javatra maro hafa taloha toy ny milina fanjairana, telefaona, radio ary koa mpanamboatra kafe.
Inona no hatao ao amin'ny tanànan'ny Alicante
Ankoatra ny fitsidihana ireo tsangambato sy tranombakoka ao aminy, ny tanàna Alicante dia toerana mety indrindra ho an'ny Trekking. Misy zotra maromaro manomboka amin'ny arabeny. Ohatra, ilay mankany Fihaonana an-tampon'ny Xortà mandalo ny Cerro de los Parados. Na koa ilay mankany Castle of Castells.
Ireo zotra roa ireo dia mizara zotra fitetezana mandra-pahatongan'ny Loma del Blocón, fa avy eo ny iray dia manohy ny Yew loharano, raha ny iray kosa tonga hatrany amin'ny Castell de Castells voalaza etsy ambony, izay ahitanao ny Faritra arcs sy ny sary hosodoko Pla de Petracos.
Inona no hohanina any Guadalest
Aorian'ireny làlana fitsangantsanganana mahery vaika ireny dia ho tafavoaka ny fahazotoananao. Ao amin'ny tanànan'ny Community Valencian dia manana trano fisakafoanana manome anao ny lovia mahazatra azy ireo.
Ny sasany amin'izy ireo dia ny vary misy turnips sy tsaramaso, ny dipoavatra voaroba, ny bitro ali oli ary ny Legioma nendasina. Mahery kokoa ny vilany blat, izay misy varimbazaha, henan-kisoa, ovy, tongolo, voatabia, tsilo sy tsaramaso, samy masaka ao anaty vilany nentim-paharazana.
Ho azy, mincho dia karazana pizza izay misy legioma, trondro ary pickles, raha ny baolina katsaka mitovy amin'ny hena hena izy ireo, na dia tsy manana hena aza fa ovy, mofo ary atody no nandrahoina.
Ahoana no ahatongavana any amin'ny tanàna
Na dia misy a tsipika fitobiana izay mahatratra ny tanàna Alicante, ny fomba tsara indrindra hahatongavana any dia amin'ny fiara. Raha avy any ianao benidorm na avy any Alcoy sy Cocentaina, ny làlana tokony halehanao dia ilay CV-70. Etsy ankilany, raha miala avy any Altea ianao, ny làlana tsara indrindra dia ny CV-755.
Inona no fotoana tsara indrindra hitsidihana an'i Guadalest
Ny faritr'i Guadalest dia manana ny toetrandro Mediterane, miaraka amin'ny ririnina malefaka sy fahavaratra mafana. Na izany aza, satria eo amin'ny haavo efa ho enin-jato ny haavon'ny tanàna ary voahodidin'ny tendrombohitra, dia hafa kely ny toetr'andro. Noho izany, ny ririnina dia mangatsiaka kokoa ary ny fahavaratra dia mahafinaritra kokoa amin'ny resaka hafanana.
Noho izany, ny fotoana tsara indrindra hitsidihanao an'i Guadalest dia vanin-taona mafana. Ankoatr'izay, amin'ny tapaky ny volana aogositra ny fetin'ny ho fanomezam-boninahitra ny Virjiny amin'ny fiheverana, miaraka amina mavitrika kokoa ny tanàna.
Ho fehiny, Guadalest manana zavatra betsaka hatolotra anao. Tanàna mahafinaritra izy io, eo an-tampon'ny hantsam-bato ary anjakan'ny tranobeny ary manana tranombakoka te hahafanta-javatra sy mahavariana. Raha manampy an'izany rehetra izany ianao, dia manana ny singa rehetra hahatonga ny fitsidihanao hahafinaritra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialan-tsasatra » Guadalest